Iidosi kunye nezinto ekungafunekiyo ukuba ziThengise uMxholo | Martech Zone
NgoMvulo, Septemba 30, 2013 NgoLwesibini, Oktobha 1, 2013 Douglas Karr
Kulungile, nantsi intsini yakho emva kwemini. Sebenzisa Meltwater Buzz, Sivele sayibona le infographic ilula kwaye intle inikezela uluhlu olufanelekileyo lwezinto umntu anokufuna ukuzigcina engqondweni xa esenza isicwangciso sokuthengisa umxholo.
Omnye wemigaqo malunga nokubhloga yile Sukushicilela ibhlog ebhalwe kakubi. Ndibone uninzi lobhalo olubi (ngaphandle kwesihloko, echaza uluvo njengeyinyani, engenantsingiselo) esesinegrama efanelekileyo kunye nopelo, ke ndiyakholelwa ukuba bebekuthetha ntoni ibhlog ebhalwe kakubi. Izithuba zam zihlala zibhalwa gwenxa… kodwa ndicinga ukuba zisenomxholo obalulekileyo ubukhulu becala ... Ngokoluvo lwam, ixabiso lomxholo wakho libetha ukuba libhalwe kakuhle kangakanani. Olu luluvo lwam kuphela kuba ndifunxa igrama kunye nopelo, nangona.
Ukuba bendizokuma bume ukuba yonke imixholo yakho kufuneka ibhalwe ngokuchanekileyo, ndinokuba nengxaki yokwenyani ngale infographic. I-infographic ibizwa ngokuba yi Yenza kunye neDont yokuThengisa uMxholo. Nokuba ukungazi kwam ulwimi lwesiNgesi kundenze ndathatha kabini kwesihloko. Akufanelekanga ukuba yiyo Iidosi kunye neeNtengiso zeNtengiso?
Okt 1, 2013 ngexesha 9:23 AM
Iingcebiso ezimangalisayo uDoug! Uyibethelele kwakhona .. Ndafunda kakhulu .. Enkosi ngokwabelana!
Okt 3, 2013 ngexesha 7:25 AM
Hee uDouglas, enkosi ngokwabelana. I-infographic emnandi kakhulu, eneengcebiso ezininzi eziluncedo. Khange ndiqaphele nayi-typo kwisihloko, ndide ndifunde amagqabantshintshi akho eposini 🙂 Kwaye unyanisile, kufanele ukuba ibe ngu "Dos".